आकाशवाणी (Aakashwani): 2013
'आकाशवाणी'का सम्पूर्ण पाठकमित्रहरु, शुभचिन्तक
बडा दशैं २०७० सालको
शुभ-उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !
साप्ताहिक (कान्तिपुर पब्लिकेशन, काठमान्डु, नेपाल)मा प्रकाशित
Caricature of some famous Nepalese
Labels: Anuradha Koirala, Artwork, caricature, Jhalanatha Khanal, Prachanda, Rajesh Hamal, Sushil Koirala
नयाँ बर्ष २०७० सालको
जनश्वास्थ्यमाथीको खेलबाड कहिले सम्म ?
मान्छेलाई प्रत्येक बर्ष लाग्ने फ्लु (Flu) लाई डाक्टरले भाईरल इन्फ्लुएन्जा र बोलचालको भाषामा रुघा-मार्गी भन्छौं । रुघा-मार्गीले मान्छे मर्ने भनेको रुघा-मार्गी धेरै बिग्रिए पछी निमोनिया लागेर हो नत्र ज्यानै चै जाँदैन । भनीन्छ साइन्सले अहिलेसम्म फ्लुको मेडिसिन बनाउन सक्या छैन । फ्लु जसरी आँउछ त्यसरी नै जान्छ पनि । आन्सरडट्कमका अनुसार सन २०१३ को अप्रिलसम्म विश्वभरमा बर्डफ्लु लागेर ३६० जना मान्छेको मात्र मृत्‍यु भयो । जबकी 'झाडा-पखलाले प्रतीदिन छ हजार बालबालिका मर्छन्'- WHO (World Health Organization) भन्छ । जसरी फ्लु लाग्ने बित्तिकै हजारौं हाँस/कुखुरा एक्कैपटक नस्ट गरिन्छ । त्यसैगरी रुघा-मार्गी लाग्या जती सबै मान्छेहरु मार्न थालियो भने के हुन्छ ? त्यो कुनै न्यायसंगत कुरा होला ? त्यसो भए बिचरा निर्दोश हाँस/कुखुरालाई चैं रुघा-मार्गी लाग्दैमा जिउँदै खाल्डोमा गाड्नु पर्छ भन्ने के छ ? त्यस्को बैकल्पिक उपाय छैन ? खै नेपालमा पशु अधिकारकर्मी बोलेको ? कि अर्काको धन जाँदा चैं बोल्नु हुन्न ?
मेरो बिचारमा यो सबै हौवा मात्र हो । नेपाल तथा भारतमा अहिलेसम्म हेपाटाइटिस बी फेला पर्या छैन र भबिस्यमा पनि लाग्ने सम्भावना छैन । भारतीय उच्चन्यालयको आदेश अनुसार भारत सरकारले हाल एन्टी हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिनको बिक्री-बितरणमा रोक लगाइसक्यो । तापनी केही बर्ष अघी औषधी बेच्ने कम्पनीले चलाएको हल्लाको भरमा नेपालीले हेपाटाइटिस बी बिरुद्धको खोप लगाए । भ्याक्सिन बेच्ने कम्पनीले करोडौ कमायो । त्यो खोपको साइडइफेक्ट हालसम्म त देखा परेको छैन तर भबिष्यमा देखा पर्न सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
हल्लाको पछी दगुर्नु ठीक होइन । अनेक थरी 'रोग आयो' भन्दै युरोप र अमेरिकि कम्पनीले खासगरी एसिया र अफ्रिकाका गरिब मुलुकहरुमा भ्याक्सिनहरुको परिक्षण गर्छन् । हाम्रो देशको सरकार पनि कस्तो ? 'फ्री'मा पायो भन्दैमा जे पनि 'हो-हो रे' को भरमा खुवाउन र घोच्ने अनुमती दिन्छ !
लिस्टभर्सडटकमका अनुसार एड्स (HIV AIDS) भन्ने रोग मान्छेले चिम्पान्जीसँग यौनकृया गरेर आएको होइन । यो त अमेरिकन र बेलायती अनुसन्धाताले मान्छे माथि गरेको कुरुप परिक्षणको परीणाम हो । जुन परिक्षण अफ्रिकाको एक गरीब देश जिम्बाम्बेमा गरिएको थियो । कुनै रोगको निदान गर्न भनेर हजारौ अफ्रिकीलाई त्यो खोप लगाइयो जस्मा चिम्पान्जीको बिर्य मिसाइको थियो । जस्को परीणामस्वरुप (बाइप्रोडक्टको रुपमा) एड्स जस्तो प्राणघातक रोगको जन्म भयो । आज यो रोगको कारण विश्वभरमा तीस मिलियन मान्छेहरुको मृत्‍यु भइसक्यो । त्यसमद्धेमा मृत्‍युहुनेहरु अफ्रिकी नै बढी छन् । एड्स एउटा रोग मात्र होइन यो एउटा गोराहरुले मानवतामाथी गरेको अपराधको कहिले नमेटिने कालो धब्बा हो ।
अबदेखी हाम्रो नेपालले पनि हात्तीपाइले, दादुरा, स्वाइनफ्लु, बर्डफ्लु, हेपाटाइटिस लगायतका बिभिन्न रोगको औषधी बिदेशीले सहयोग स्वरुप सित्तैमा दियो भन्दैमा सर्वसाधारणको जीवनमाथी खेलबाड हुने गरी परिक्षण गर्न दिनुहुन्न । हाम्रा पिता-पुर्खाले 'खैरो आँखा हुनेहरु (अर्तात् गोराहरु) को कहिले विश्वाश नगरनु' भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले कुनै पनि औषधी, खोप वा अनेक किसिमको थोपोहरु जनतालाई खुवाउनुपूर्व पहिला नेपाली, भारतीय र चिनिया बिशेषग्य सम्मिलित बिशेष (स्पेसल) जाँच आयोग गठन गर्नु पर्छ र त्यस्ले 'हुन्छ' भने पछी मात्र खोप तथा औषधी खुवाउने अनुमती दिनुपर्छ । अन्यथा भोली एड्सभन्दा खतरनाक बिमारी नजन्मेला भन्न सकिन्न ।
Labels: bird flu, Human flu, Note, swine flu
नेपालीलाई अचेल एउटा गम्भिर खालको आँखाको रोगले च्याप्दै लगेको छ । त्यो रोग नेपाल भित्रिएको खासै धेरै नभए पनि यो एक किसिमको सरुवा रोग भएको हुनाले फैलँदो क्रममा छ । यो रोगको उत्पत्ति युरोपबाट भएको हो । यो भाषाको माध्यमले दिमागमा छिर्छ अनी आँखालाई कामै नलाग्ने बनाउँछ । त्यो रोगको नाम हो ‘अंग्रेजीमेनिया’ ।
यो रोगको मुख्य लक्षण युरोपियन र अमेरिकनहरुले गरेका हरेक काम आधुनिक र वैज्ञानिक देख्नु अनी आफ्नो पिता–पूर्खाले सिकाएका काम र ज्ञानजती सबै अवैज्ञानिक, पुरातन तथा पाखे देख्नु हो । यो रोगले धेरै गाँजेका मान्छेहरुको कुरा सुन्नु भयो भने तपाईंलाई पुरै नसके पनी अर्धपागल चैं बनाउँछन् ।
यो रोगले खासगरी युवा÷युवतीलाई बढी समात्छ । अचेल उनीहरुका अभिभावकलाई पनी यस्ले समात्न थालेको छ । उनीहरुको बिचारमा भुटेको मकै खायो भने पाखे होइन्छ । कसैले घरमा भएको मकै भुटेर सिनिमा हल वा सार्वजनीक ठाउँमा खायो भने लाज हुन्छ । तर त्यही मकैलाई कागजको बट्टामा राखेर ‘मकै होइन पपकर्न हो’ भन्यो भने चैं खान लाज हुँदैन ।
उनीहरुको केही सिद्धान्त छन् । ति यस्ता छन्; ढाका–टोपी-दौरा-सुरुवाल अनी साडी–चोली लायो भने पाखे । युवतीहरुले तिघ्रा देखिने गरी मिनीस्कर्ट वा टाइट जिन्स लगाए भने चैं मोर्डन पहिरन हुन्छ । अनी युवाहरुले चैं कट्टु देखाएर खुस्किन लाग्या जिन्स अनी ५ देखि १० हजार दाम पर्ने बिदेशी जुत्ता लगाए भने त्यो आधुनिक हुन्छ । तर भलादमी तरिकाको पहिरन लगाए पाखे । होटलमा मैदा सडाएर बनाइने पिज्जा, बर्गर र म्याकडोनाल्डको अखाद्य केमिकल राखेर तेलमा तारेको सडेको कुखुरा चैं आधुनिक खाजा अनी अरुले खाने गरेको चना र चिउराको खाजा चैं पाखे खाजा । कार्बोनेटेड वाटर अर्थात् 'ढ्याउ' डकार आउने कोक/पेप्सी चैं मोर्डन पेय अनी फलफुलको जुस वा दही–दुध चैं पाखे पेय । अंग्रेजीमा बोल्नु, टाइ लगाउनु, अंग्रेजी गीत गाउनु, हलिउडको कलाकारको कुरा गर्नु नै मोर्डन लाइफ स्टायल हो । नेपाली लोक वा आधुनिक गीत सुन्यो अथवा मोबाइलमा रिङटोन राख्यो भने पाखे ।
फेसबुक÷टुइटर को स्टाटस कनीकुथी भए पनी अंग्रेजीमै लेख्नु राम्रो । नेपालीमा लेख्यो भने पाखे । नेपाली साहित्य पढ्यो भने पाखे, अंग्रेजी उपन्यास पढ्यो भने स्ट्यान्डर । गोरो छाला राम्रो, कालो नराम्रो । कालो कपाल नराम्रो, गोल्डेन राम्रो । आमा–बुवा भनेको पाखे, मम्मी–ड्याडी भनेको मोर्डन । काका–काकी, मामा–माइजुलाई अंकल भन्यो भने मोर्डन नत्र पाखे । लेखेर पार नलाग्ने हुनाले आजलाई यत्ती नै । अस्तु ।
– योगेश कुमार खपाङ्गी
Labels: Note, oldies vs modern
एकजना मान्छेले आफ्नै मृत्‍यु भयो भन्ने ठानेछ । दुनियाँले सम्झाए - 'तँ मरेको छैनस् । जिउँदै छस् । किन आँफैले आफुलाई मरिसके भन्छस् !' उस्ले मानेन । उस्लाई डाक्टरकोमा लगियो । डाक्टरले पनि 'तपाईं जिँउदै हुनुहुन्छ । सत्य कुरा स्विकार्नुस् ।' भनेर सम्झायो । तर उस्ले मानेन । अन्त्यमा डक्टरले भन्यो - 'म तपाईंको शरीरमा कतै काट्छु । रगत आएछ भने तपाईं जिँउदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईं मान्नुस् । रगत आएन भने म तपाईंको कुरामा सहमत हुन्छु । हुन्छ ?' । त्यो मान्छे डाक्टरको कुरा मान्न राजी भयो । अनी डाक्टरले उस्को हातमा काट्यो । रगत आयो । त्यो मान्छेले 'यहाँ मात्र काटेर हुन्न । अन्त पनि काट्नुहोस्' भन्ने आग्रह गर्‍यो । तर जती ठाउँ काट्यो त्यती ठाउँ रगत आयो । अनी त्यो जिद्दी मान्छेले अन्त्यमा के भन्यो थाहा छ ?
उस्ले भन्यो - 'माफ गर्नुहोस् डाक्टर साहेब, म गलत रहेछु । मरेको मान्छेको पनि रगत आउँदो रहेछ !'
सबैजना त्यो मान्छेसँग हार खाए ।
त्यस्ता मान्छेहरु समाजमा प्रसस्त छन् । मैले जानेबुझेको अनुभव र ज्ञानको आधारमा कतीपय ब्यक्तीलाई 'सत्य यो हो' भनेर सम्झाउँने प्रयास गर्छु तर उनिहरु मान्नेवाला छैनन् । त्यसैले कहिले-काँही म जानी-बुझी उनिहरुसँग हारिदिन्छु । सोंच्छु शायद उनिहरुले पनि मलाई त्यही सोच्दोहुन् जुन मैले उनिहरुको बारेमा सोंच्छु !
क्रिकेट खेलको शुरुवात बेलायतका राजा एड्वर्डका फुच्चे छोराले गरेका रहेछन् सन १५९८ मा (विकिपेडियाका अनुसार)। त्यसबेला दरबारमा राजा-महाराजाहरुको हरहमेसा काम त हुँदैहुदैनथियो । फुच्चेहरुले खेल्थे, समय कटाउन राजा हेरेर बस्थे । पछी-पछी राजालाई मनपर्ने खेल भनेर जनताले पनि खेल्न थालेछन् । बिस्तारै-बिस्तारै क्रिकेट खेल बेलायतको राष्ट्रिय खेल भएछ । पछी साम्राज्यबादी बेलायतीहरुले जुन-जुन देश कब्जा गरे त्यहाँ-त्यहाँ खैरेहरु पुग्थे । अर्थोक काम केही हुन्नथ्यो । त्यसैले उनिहरु क्रिकेट खेल्ने बस्ने काम गर्थे । के गर्ने खाना त पचाउनै पर्‍यो ! एउटै खेल सात-सात दिन सम्म खेल्थे उनिहरु ।
हरेक नोकरलाई मालिक भन्ने लालशा त हुन्छ नै । मालिकले जस्तो लगाउनु, मालिकले जस्तो बोल्नु र मालिकले जस्तो खेल खेल्नु नै उनिहरुको चाहना हुन्थ्यो । त्यसैले जुन-जुन देश बिगतमा बेलायती उपनिवेश थियो, त्यही देशका जनताले क्रिकेटलाई मरिहत्ते गरेर खेल्न थाले । जनताको त काम थियो । सात-सात दिनसम्म खेल खेलेपछी खान-लाउन त कसैले नि फोकटियामा त दिदैन नै थियो । अनी खेलको अवधी घटाएछन् । त्यसपछी 'वनडे म्याच' खेल्न सुरुवात भएछ । आज पनि हेर्नुस् बेलायत र बेलायतका पूर्वदाश देशले मात्र क्रिकेट खेल्छन् । जस्तो - भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान, बङ्लादेश, श्रीलंका, नुजिलेन्ड, वेष्ट इन्डिज आदी ।
त्यसमद्धे भारतमा हेर्नुस् । क्रिकेट म्याच हुन थाले पछी त्यो देशको समय थामिन्छ । क्रिकेट खेल अवधीभर त्यहाँ उद्द्योगधन्दा-ब्यापार र काम-काज सबै ठप्प हुन्छ । सरकारी कार्यालयको समय नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ खेलको लागि । त्यती मात्र नभएर करोडौंको रकममा बाजी थाप्ने, म्याच फिक्सिङ गर्ने, ड्रगको कारोबार गर्ने, बेस्याब्रित्ती गराउने जस्ता अनैतीक काम हुनथालेको छ आजको भारतमा । त्यहाँ रातारात बिदेशी लगानीको अखबार र टि.भी च्यानलले क्रिकेटरहरुलाई महान सेलिब्रेटी बनाइदिन्छ । अनी भारतीय जनताले उनिहरुको पूजा गर्न थाल्छ । कपिल देव र सचिन तेन्दुकर महान ब्यक्तिहरु कहलाइन्छन । आज भारतको कुनै पनि बच्चा बैज्ञानिक, चिकित्सक, इन्जिनियर, समाजशास्त्री, शिक्षक, नेता बन्न चाँहदैन । कपिल तेन्दुल्कर बन्न चाहन्छ कि त शहरुख खान । केटी छन् भने केट्रिना कि करिना वा सन्नी लियोनी । अनी तेन्दुल्कर र खानहरुले के गर्छन् थाहा छ ? कि कोक-पेप्सी, आलु चिप्स, बुस्टको बिज्ञापन गर्छन् । 'डरके आगे जित है । बुस्ट इज द सिक्रेट अफ माइ इनर्जी ।' वा यस्तै भन्दै अन्य सामान बेच्छन् - भारतका आइकोनहरुले । स्वदेशमा बसेर बिदेशी मालको प्रचार गर्छन् केट्रिना-शाहरुख-सैफ र तेन्दुलकरहरुले । जनता त के हो र ! रातको दिन देखाए पछी त एकदिन न एक दिन त बिज्ञापनको चँगुलमा फँसीहाल्छ नि ! त्यसैले यो खेलको बिरोधमा अहिले भारतभरीका सचेत नागरिकहरु उठ्न थालेकाछन् ।
हेर्नुस् बिडम्बना, हाम्रो नेपालले पनि यो खेलमा खुब राम्रो शुरुवात गर्न थालेको छ । जो कहिले कसैको दाश थिएन । तर अब क्रिकेटप्रतीको बढ्दो उत्साह र जनसहभागीता हुन थालेको छ । अब बिस्तारै-बिस्तारै सरकारलाई एककिसिमको मनोबैज्ञानीक प्रेशर पर्न थाल्छ - क्रिकेटको बिकासको लागि बजेट छुट्याउने । यो खेल बेलायती दब्दबाको निशानी हो । त्यसैले खेल नै त हो भन्ने कदापी सोच्नु हुन्न । यो त्यस्तो खेल हो जहाँबाट देशमा अराजकता भित्रिन्छ । यो खेल हाम्रो होइन - यो हाम्रो माटो सुहाउंदो छैन । बरु डन्डी बियो खेले हुन्छ तर क्रिकेटमा लगानी गर्नु बालुवामा पानी हाले सरह हो ।
Labels: Neplali Cricket, Note
एउटा संस्था छ - अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा कार्यालय छ । त्यो यस्तो मालिक संस्था हो जस्लाई विश्वभरीका देशले लगेर पैसा बुझाँछन् । त्यस्ले रिन पनि दिने काम गर्छ । तर रिन दिदैं पिच्छे - 'तेरो पैसाको अवमुल्यन गर अनी दिन्छु' भन्दोरहेछ । अनी हाम्रो नेपालले चै त्यो कोषमा पैसा जम्मा गर्न थालेको सन १९८४ देखी रहेछ । अर्थात् २९ बर्ष भएछ पैसा जम्मा गर्न थालेको । खिलराज सरकारका अर्थ मन्त्री शंकर कोइरालाले भनिसके - 'विश्व मुद्रा कोशमा पैसा बुझाउनु छ । त्यसैले यसपालाको बजेट पूर्ण बजेट हुनेछ ।' हेर्नुस् हाम्रो बेवकुफी 'गाँठ भी गँवाना, बेवकुफ भी बनना !'- हिन्दी भनाइ) । एकातिर पैसा पनि जम्मा गर्नु छ । अर्का तिर रिन लिंदै पिच्छे आफ्नु पैसाको अवमुल्यन गर्नु पर्ने । त्यो पनि अमेरिकन डलर सँग !आज हाम्रो रुपिंयाको बिजोग हेर्नुस् त अमेरिकन डलर १ बराबर नेपाली ८७ रुपिंया छ । तर आश्चर्यको कुरा के छ भने खुद अमेरिकाले जनवरी १, १९८४ देखी त्यो कोशमा पैसा जम्मा गरेको छैन । अर्थात २९ बर्ष नै भएछ उस्ले पैसा जम्मा गर्न छोडेको । त्यसो भये हामी चैं बढी जान्ने भएर त्यो कोशमा नभएको पैसा रिन खोजी-खोजी किन बुजाउनु पर्ने । हेर्नुहोस् - अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको वेबसाइटमा वास्तविकता ।
नेपालको ट्रान्जिक्सन -
अमेरिकाको ट्रान्जिक्सन -